Taliska AMISOM oo qiray in ciidankooda ay dad shacab ah ku xasuuqeen gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliska AMISOM oo qiray in ciidankooda ay dad shacab ah ku xasuuqeen gobolka Sh/hoose
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay dileen 6 qof oo la socotay gaari Homey ah oo kusii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kadib markii darawalka gaarigaasi uu ka dhaga adeegay inuu gaariga joojiyo, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Gaarigaasi ayaa la sheegayaa in lagu dhuftay qoriga Baasuukaha ah, waxaana gebi ahaan ku dhintay 6-da qof ee gaariga saarnaa, iyadoona seddax ka mid ah dadkaasi ay ahaayeen haween, halka seddaxda kalena ay ahaayeen niman.
“Gaari Homey ah ayaa kasoo gudbay jid-gooyadda AMISOM, waxaana lagu amray inuu joogsado, balse darawalkii ma qaadanin amarkii, taasi oo ciidanka ku qasabtay inay toogasho ku dilaan 6 qof oo la socotay gaarigaasi” Ayaa lagu yiri warka-qoraalka ah ee kasoo baxay taliska AMISOM.
Dhinaca kale, dadka deegaanka oo qadka teleefanka kula hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay inay ciidanka AMISOM, si ku talagal ah ay Baasuuke ugu dhufteen gaarigaasi oo ay sheegeen inuu xilligaasi magaalada Baydhabo u waday khudaar.
Sidoo kale, saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka Sh/hoose ayaa ku eedeeyay ciidanka AMISOM inay 11 qof oo rayid ah ku dileen labo weerar oo ka kala dhacay degmooyinka Qoryooleey iyo Marka.
Si kastaba, ma ahan markii ugu horeeysay oo ciidamo ka tirsan AMISOM ay dalka Soomaaliya gudihiisa ku xasuuqaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan, waxaana inta badan jirin cid ka tirsan mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo arrintaan soo noq-noqotay wax ka qabta.